म कसरी वजू गरुँ? – Islam Guide
म कसरी वजू गरुँ?
डिसेम्बर 16, 2017 Comments
(शुद्धीकरण) فهد بن سالم باهمام द्वारा
वजूको महत्व- वजू अथवा पवित्रता प्राप्त गर्नु सर्वोत्कृष्ट तथा महत्वपूर्ण सत्कर्म हो। यदि कोही स्वच्छ र शुद्ध मनले वजू गर्छ भने अल्लाहले उसका सम्पूर्ण पाप तथा गल्तीहरुलाई पखालि दिन्छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “जुन बेला एउटा मुस्लिमले वजू गर्छ, जब अनुहार धुन्छ भने उसको अनुहारमा रहेका सम्पूर्ण पापहरु जसलाई उसले आँखाले हेरेको हुन्छ, पानीको थोपाको साथमा झरेर जान्छ, जब हात धुन्छ भने हातले गरेका सम्पूर्ण पापहरु पानीको थोपाको साथमा झरेर जान्छ, जब खुट्टा धुन्छ भने खुट्टाले गरेका सम्पूर्ण पापहरु पानीको थोपाको साथमा झरेर जान्छ। यहाँसम्म कि ऊ पूर्ण निश्चल र पवित्र हुन्छ।” (श्रोत- मुस्लिम : २४४)
‘विस्मिल्लाह’ भनेर शुरु गर्नु।
दुवै हातहरुलाई नाडीसम्म तीन-तीन चोटि धुनु उत्तम हो।
मुखमा पानी हालेर राम्रोसँग कुल्ला गर्नु। एक चोटि अनिवार्य हो र तीन चोटि गर्नु उत्तम हो।
नाकमा पानी हालेर माथि तान्नु र जोडले सफा गर्नु, नाकमा कुनै समस्या छैन भने हावाद्वारा पानी भित्र तान्नु मुस्तहब हो र नाकलाई पूर्ण रुपमा सफा गर्नु पर्दछ। एक चोटि अनिवार्य हो र तीन चोटि गर्नु उत्तम हो।
अनुहार धुनु, निधारमा कपालदेखि चिउँडोसम्म, एक कानदेखि अर्को कानसम्म, तर कान अनुहारमा पर्दैन। एक चोटि धुनु अनिवार्य हो र तीन चोटि धुनु उत्तम हो।
दुबै हात औंलादेखि कुहिनासम्म धुनु, पहिले दायाँ अनि बायाँ। कुहिनाहरु वजूमा सामेल छ। एक चोटि धुनु अनिवार्य हो र तीन चोटि धुनु उत्तम हो।
टाउकोलाई मसह गर्नु (घस्नु), दुवै हातका औंलाहरुलाई पानीमा भिजाएर निधारबाट शुरु गरेर पछाडि मांसपेशीसम्म लैजानु, फेरी पछाडिदेखि निधारसम्म फिर्ता ल्याउनु। टाउको र कानको मसह मात्र एक पटक गर्नु पर्दछ। माथि उल्लेखित झैं तीन पटक गर्नु पर्दैन।
दुवै कानलाई मसह गर्नु (घस्नु), दुवै चोर औंलाहरुले दुवै कानको भित्रपट्टि र बूढी औंलाले कानको बाहिर पट्टि घस्नु पर्छ।
दुवै खुट्टालाई गोलीगाँठो सम्म धुनु, पहिले दायाँ अनि बायाँ। एक चोटि धुनु अनिवार्य हो र तीन चोटि धुनु उत्तम हो। वजू गरेर मोजा लगाएको छ भने स्थानीयले २४ घन्टा र यात्रीले ७२ घन्टा सम्म मसह गर्नु जायज छ।